Kojo Antwi | Igbo kasahorow
Tuzde. Ọnwa Ise 24, 2022
Museke, Wenezde. Ọnwa Ise 17, 2006 - Monde. Ọnwa Ise 16, 2022. 𓀠 171
Kojo Antwi na-bụ ọnye?
Kojo Antwi na-bụ mmadu ezigbo.
Kojo Antwi na-ime ụmụ egwu.
Ọ na-fu Afrịka nanya. Ọ na-ọgụgụ ụbọchị kwa.
Anyị na-fu Kojo Antwi nanya.
#ọnye #ezigbo #mmadu #ime #egwu #ọ #fu ... nanya #Afrịka #ọgụgụ #kwa #ụbọchị #anyị
Pụtara Nke "Vusi Mahlasela - River Jordan"
Mara Mma Nke "Osei Kwame Despite"